Caalamka, 01 November 2016
Norway oo Shraciga kala Noqonaysa Soomaali Badan
In ka badan Kun iyo Lix boqol (1600) qof oo Soomaali ah, ayaa dowladda Norway ay kala noqotey sharciyadii aqoonsiga waddankaasi.
Xabad Joojintii Yemen oo Dhamaatay
Isbaheysiga uu sacuudiga horkacayo ayaa maanta oo Axad ah sii wada duqymaha cirka ee ay ku hayeen baraha Xuutiyiinta eek u yaala agagaaraha magaalada Sanca.
Burcad Badeed Sii Deysay Ajaaniib ay Heysteen
Wararka ka imanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in habeenkii Jimcaha ahaa (Xalay) la sii daayey 26 nin oo u kala dhashay dalalka Shiinaha, Filibiin, Indonisia, Teywaan, iyo Fiyetnaam, kuwaas oo muddo afar sano koox burcad-badeed ahi ay madax furasho u haystay.
Ergo ka Socota Taliban oo Booqanaya Pakistan
Wefti ka socda Talibanka dalka Afghanistan ayaa u safray dalka Pakistan, kuwaas oo ka mid ergada wadahadalka Qadar, iyaga oo dalkaas kala hadli doona arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xadhiga loo geystay qaar ka mida hoggaamiyayaashooda,
Wariyeyaal lagu Xidhay Muqdisho
Dawladda Soomaaliya ayaa xidhay, 3 wariye oo la shaqeeya Tilifishanka Al-Jazeera.
Dooddi Musharixiinta Madaxweynanimada Mareykanka ee u Danbeysay
Musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump ee u tartamaya xilka madaxweynanimo ee dalka Mareykanka ayaa ku kulmaya dooddi sadaxaad oo ah middi ugu danbeysay dooddaha musharaxiinta madaxweynanimo.
Wararki Ugu Danbeeyey ee Dagaalka Mosul
Howlgalka ka xoreynta kooxda Daacish ee Magaalada Mosul oo in mudda ahba la wada sugayey ayaa hada ka bilowday nawaaxiga magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraq ee Mosul.